ဥရောပနှင့်အတူနယူးရထား Links များအာရှ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပနှင့်အတူနယူးရထား Links များအာရှ
အသစ်ရထားလိုင်းကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်, အဇာဘိုင်ဂျန်ဖုံးအုပ်, ကြက်ဆင်, နှင့်ဂျော်ဂျီယာ. အဆိုပါလိုင်းကျော်ဖုံးလွှမ်း 820 ကီလိုမီတာနှင့်အပြင်ကုန်တင်ပြီးရှိကြတယ် ခရီးသည်တင်ရထား. ပထမဦးစွာ, မျဉ်းရုရှားကကျော်လွှားနေတုန်းဥရောပနှင့်တရုတ်ချိတ်ဆက်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ. The train will operate from Azerbaijan’s capital Baku and the Georgian capital Tbilisi to the city of Kars in Turley. ထို့အပွငျ, ဒါဟာလျှော့ချပါလိမ့်မယ် ခရီးအချိန် ဥရောပရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အကြား တရုတ်ရထားလမ်း. အဇာဘိုင်ဂျန်၏သမ္မတ, ကြက်ဆင်, နှင့်ဂျော်ဂျီယာ, အဖြစ်ကောင်းစွာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်, အသစ်ကမီးရထားလိုင်း၏အဖွင့်သို့တက်ရောက်.
ပထမဦးစွာ, ရထားလိုင်းကိုမူလအတွက်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ် 2010 ပြီးတော့၌တည်၏ 2012. သို့သျောလညျး, ကြောင့်အာမေးနီးယားဖြတ်သန်းမလိုင်းကိုရန်, အမေရိကန်နှင့်အီးယူနှစ်ဦးစလုံးငွေရေးကြေးရေးအထောက်အကူမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ဒီနှောင့်နှေးစေသော. ဖြည့်စွက်ကာ, လိုင်းယခင်ကသူတို့ရဲ့ခဲ့နိုင်ငံများမှတဆင့်တတ်၏ နယ်စပ် တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှပိတ်ထား (ပြန်မှချိန်းတွေ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ).
ဒုတိယအ, အဆိုပါအမည်ရှိသောလိုင်း '' Eurasian တံတား'', ကဖြတ်သန်းနိုင်ငံများ၏စီးပွားရေးချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်. တရုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့အနည်းငယ်သာ၌ဤလိုင်းပေါ်တွင်ဥရောပမှတရုတ်ကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ကြသည် 12 ရက်ပေါင်း. ထို့အပွငျ, အဆိုပါ မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်5ခုန်ကျော်သွားနိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားဒီနံပါတ်ကိုနှင့်အတူတစ်နှစ်လျှင်ကုန်တင်၏တန်ချိန်သန်း 17 သန်းအချိန်ကျော်. ထို့အပြင်, ဒီဆိပ်ကမ်းစေမည် tool တစ်ခု ထဲမှာအဇာဘိုင်ဂျန်တွင်အကြီးဆုံး ကက်စပီယန်ပင်လယ် ဒေသ.
ဒါကြောင့်သူတို့ကဂျော်ဂျီယာထုတ်ချေးကြောင်းလူသိများသည်သို့သော်အဇာဘိုင်ဂျန်လိုင်း၏အပြည့်အဝကုန်ကျထုတ်ဖော်မထားပါဘူး $775 လိုင်း၏ဂျြောဂြီယနျစိတျအပိုငျးငွေကြေး.
ကာဇက်စတန်ယခုအသစ်က '' ပိုးလမ်းမကြီးအဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ထားပါတယ်’ ဥရောပနှင့်အကြား၎င်း၏တိုးမြှင့်ကုန်တင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံ. သမိုင်းကြောင်းအကာဇက်စတန်ဥရောပများအတွက်ဆက်သွယ်ပြည်နယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အာရှတိုက်, နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ. ကာဇက်စတန်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ resur ပြန်လည်ရှင်သန်လာရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာဥရောပနှင့်အာရှကြားအကွာအဝေးကိုဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် 10,000 ကီလိုမီတာ. ထို့အပွငျ, ကာဇက်စတန်ကျော်သုံးစွဲထားပြီး $3 ယင်း၏ရထားလမ်းလိုင်းများပေါ်တွင်ဘီလီယံအထိ. ဤသည်တို့ပါဝင်သည် $250 ယင်းအပေါ်သုံးစွဲသန်း Khorgos Gateway မှာ. ဤတံခါးပေါက်သည်တရုတ်ရထားများကိုကုန်ပစ္စည်းများကိုဥရောပရထားများသို့လွှဲပြောင်းရန်လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲရန်မလိုဘဲခွင့်ပြုသည်.
ပထမဦးစွာ, အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတရထားပေါ်တွင် commented
အဆိုပါဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းအာရှနှင့်ဥရောပအကြားအတိုဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော link ကိုဖြစ်ပါတယ်
ထို့အပြင်, ဥရောပသမဂ္ဂ commented
အဆိုပါဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်း၏အဖွင့်ဥရောပသမဂ္ဂချိတ်ဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ကြက်ဆင်, ဂျော်ဂျီယာ, အဇာဘိုင်ဂျန်, ရှေးဟောင်းပိုးလမ်းတလျှောက်နှင့်ဗဟိုအာရှ ...,
သင်ဒီမှာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်, အဘယ်ကြောင့်မယူ3သင်၏နောက်ခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးမီးရထားလက်မှတ်ကိုရှာဖွေမိနစ်? သင်သွားလေရာရာ၌ ဥရောပ၌သွားလာရန်စီစဉ် ငါတို့သည်သင်တို့လက်မှတ်တွေကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျ၏အဲလ်ပ်တောင်တန်းကြည့်ဖို့ရှာကြသည်ရှိမရှိ ဆွစ်ဇာလန် နှင့် အီတလီ သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှု ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် ဟန်ဂေရီ အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ ယခု. အားလုံးအများဆုံးလူသိများငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ အသုံးပြု. လက်မှတ်တွေများအတွက်ပေးဆောင်
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သင်တို့အား / fr အဆိုပါ / ru ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#အာရှတိုက် #asiaeurope #raillink europeantravel ရထားခရီးသွား
အဘယ်အရာကိုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာဥရောပမှာတော့လုပ်ပါရန် & ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ